theZOMI: [moemakadaily@moemaka.biz] 15th Marhc - MoeMaKa Daiy
[moemakadaily@moemaka.biz] 15th Marhc - MoeMaKa Daiy
Posted by Maung Yit at 12:16 AM0comments
U Ohn Kyaw - Bogyoke and Thar Du
ပဌမလက်ရာက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း စစ်ဝတ်စစ်စားနဲ့ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ပုံ၊ သိပ်ပြီး ခန့်ညားလှတဲ့ အဲဒီပုံဟာ ဟိုးအရင်တုန်းက မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တခုရဲ့ အဖုံးမှာ ပါခဲ့ဖူးတဲ့ ပုံပဲ။ ဘယ်နှစ်တုန်းက ဘယ်စာစောင်ထဲမှာလဲ ဆိုတာကိုသာ အပ်ချမတ်ချ မပြောနိုင်တာ၊ အတော်ကို မြင်ဖူးနေကျပုံပဲ။ Forbidden Hero လို့လည်း နာမည်ပေးထားတယ်။ (ဘယ်သူတွေ မှိန်အောင်လုပ်ပေမယ့် "ဒို့ဗိုလ်ချုပ်မှန်း လူတိုင်းသိတယ်" ဆိုတဲ့ အတွေးကို ၀ါနုနဲ့ ထွန်းဝင်းအောင်က ပေးချင်တယ် ထင်ပါရဲ့)
ဒုတိယလက်ရာက ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကိုယ်တပိုင်း၊ အဖြူရောင် ပလာစတာရုပ်တွေကို ပြထားတာ။ အရုပ် ၄၀ ကို (တတန်းမှာ ၅ ခု၊ အတန်း ၈ တန်း) တင်ပြီး ပြထားတာ။ ခေါင်းရဲ့ နောက်ကပဲ မြင်ရတာ၊ ရှေ့မျက်နှာကို မမြင်ရဘူး။ အဲဒီအတန်းဘောင်ကြီးကိုလည်း အဖြူဆွတ်ဆွတ် ချယ်ထားတာ။ ပြီးတော့ light box အလင်းဖျော့ဖျော့ ဖြူဖြူခံပြီး ပြထားလိုက်သေးတယ်။ Intallation လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ ထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့ လောကသစ်ဆီသို့ "ဗိုလ်ချုပ်နောက်က" လိုက်ခွင့်မရခဲ့ရှာတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကို ၀ါနုနဲ့ ထွန်းဝင်းအောင်က ရည်စူးလေသလား။
"Thakhin Pe Than's long march" လို့လည်း အမည်ပေးထားတယ်။ အဘုိုး "သာဓု"ဟာ မြေး "၀ါနု" ကြောင့် တမလွန်ဘ၀ကနေ ပြန်ပြီး အသက်ဝင်လာတယ်။ နောက်ပြီး "အကြင်တို့ လင်မယား" ထဲမှာ ကြည့်ရာတာထက် ပိုပြီး နုပျိူနေတော့တယ်။
Posted by Maung Yit at 11:41 PM0comments
Labels: News Features, U Ohn Kyaw
Junior WIn - My Life will go on goes Amazon e-book
JuniorWin၏ ဒုတိယမြောက်လက်ရာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။ "တွေးမိသော အတွေးများ" ကနေ "ဘ၀စာမျက်နှာများ" ကိုဖတ်ဖူးထားသော ကျွန်မ၏ စာဖတ်ပရိသတ်များကတော့ ဒီစာအုပ်ထဲ ဘာတွေပါသလဲ ဆိုတာ မှန်းလို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Maung Yit at 9:59 PM0comments
Maung Yit - People Desire ...
Posted by Maung Yit at 6:00 PM0comments
Myanwaddy Bridge Traffic JamaMess
မောင်လှမျိုး (တံတားထိပ်)၊ မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၃
ကျွန်တော်တို့ ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်က နာမည်ကြီး မြ၀တီမြို့တော်ဟာဖြင့် နေ့စဉ် ဆိုသလို ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပတ်လမ်းပေါ် စည်းကမ်းမဲ့ ရပ်နေသော ယာဉ်များကစလို့ ဧရာဝတီဘဏ်၊ KBZ ဘဏ်ရှေ့မှာ ပရမ်းပတာ ယာဉ်ပိတ်နေတာပါ။
ဘယ်သူကမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့လည်းအင်တာနက် စာမျက်နာကနေ အော်ရတာ အကြိမ်လည်း များနေပါပြီ။ မြ၀တီ ယာဉ်ထိန်းရဲများဟာဖြင့် ပြည်သူရဲ့အသံကို နားထောင်ပုံ မရတာဘဲလားတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။
ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်လူကြီးလာမှ လမ်းရှင်းတာဆိုတော့၊ လူကြီးအတွက်ပဲ အလုပ်လုပ်တာလား ဆိုတာကို တွေးစရာဖြစ်လာနေပါတယ်။ လစာကတော့ ပြည်သူတွေဆီက ယူနေတာပေါ့နော်။ ဒီမနက် တံတာထိပ်မှ လမ်းတွေပိတ်နေလိုက်ပုံများ ရှုပ်နေလိုက်ပုံများ ဘယ်ယာဉ်ထိန်းမှ လာပြီး မထိန်းပါဘူး။ လူကြီးလာတာမှ မဟုတ်တာလေ … … ။
Maung Paris - Learning Frnech # 6
ကြိယာအုပ်စု (၁) ဟာ Conjugaison လုပ်ရန် အလွယ်ကူဆုံး ဆိုပေမဲ့လည်းချွင်းချက်လေးတွေတချို့ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဥပမာ -- Conjugaison ဆိုတဲ့ စာလုံး ကိုကြည့်ရင် ကွန် - ဂျူ - ဂေး - ဇွန်း ဆိုပြီး အသံ ၄သံထွက်တဲ့ အတွက် Syllabe ၄ ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားပဲပြောပြော၊ စာပဲ ဖတ်ဖတ် စာလုံးတိုင်းကို သူ့ရဲ့ Syllabe အကုန် ထွက်ရပါမယ်။ regarder ရ ဂါ ဒေ ကြည့်သည်ဆိုတဲ့ ကြိယာမှာ Syllabe ၃ ခုပေါ့။
ကောင်းပြီ ၊ ကြိယာ အုပ်စု (၁) မှာပါဝင်တဲ့ "... er " နဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ ကြိယာထဲက တချို့ကိုကြည့်ပါ။
၁။ " ... cer " ဖြင့် ဆုံးသောစာလုံးများ။ ဥပမာ -- placer ပလာစေ ၊ အုပ်စု (၁) တွင်ပါဝင်သည်။ ထားသိုသည်၊ နေရာချထားသည်ဟု အဓိပါယ်ရပါသည်။ Conjugaison လုပ်သော အခါတွင် အုပ်စု (၁) ဖြစ်သောကြောင့် Je place ကျနော် နေရာချထားသည်, Tu places ခင်ဗျား နေရာချထားသည် , il place သူ နေရာ ချထား သည် , elle place သူမနေရာချထား သည် ဟု အဓိပါယ်ရပါသည်။
သို့သော် ကျနော်တို့ နေရာချထား သည် ဟုပြောရန် Nous placons ဟုသုံး၍ မရတော့ပါ။ Nous plaçons နူ ပ လာ စွန် ဖြစ်ရပါမည်။ စာလုံး " c " မဟုတ်တော့ပါ။ အောက်တွင် ပါသော အတက်ကလေးကို cédille ဟုခေါ်ပြီး စာလုံး "a" "o" "u" စာလုံးများ ၏ရှေ့တွင် " c " ကို " ç " ပြောင်း ပေးရပါမည်။ အသံအနေနှင့် " ç " စ သံထွက်ပါမည်။
၂။ " ... yer " ဖြင့် အဆုံးသတ်သော ကြိယာများတွင် Conjugaison လုပ်သောအခါ " y " မှနေ
" i " သို့ပြောင်းပါမည်။ ဥပမာ -- nettoyer နေ တွား ရေး သုတ်သည် ဆိုသော ကြိယာကို ကြည့်ပါ။
ရ နေ တွား လာ တားဘ် လ် ကျနော် စားပွဲကို သုတ်သည်။ စာကြောင်းတွင် nettoieဆိုမှမှန်ပေမည်။
"e" ၏ရှေ့တွင် ကျရောက်ပါက " y " သည် " i " သို့ ပြောင်းသွားမည်။
Je nettoie ရနေတွား ကျနော် သုတ်သည် , il nettoie အီလ်နေတွား သူ သုတ်သည် , nous nettoyons နူ နေတွားယွန် ကျနော်တို့ သုတ်သည်("e" ဖြင့် မဆုံးတဲ့အတွက် ပုံမှန် )
" ... ayer " နဲ့ဆုံး တဲ့ကြိယာဆိုရင်တော့ " y " မှ " i " သို့ ပြောင်းရင်လဲမှန်တယ်၊မပြောင်းရင်လဲ မှန်တယ်။ ဥပမာ - payer ပေး ရေး ငွေပေးသည်။ ( donner ဆိုရင်တော့ ပစ္စည်း တခုခု ပေးတာပါ)
Je paye ( paie ) ရ ပေး ကျနော်ငွေပေးသည် , elle paye ( paie ) အယ်လ် ပေး သူမ ငွေပေးသည်
၃။ " ... eler " အဆုံးသတ်ဖြစ်နေပြီး နောက် ဆုံးက အသံမထွက်တဲ့ "e" နဲ့ အဆုံးသတ်ရင်တော့
Conjugaison လုပ်တဲ့အခါမှာ " l " က ၂လုံးထပ်သွားရပါမယ်။ ဥပမာ - appeler အာ ပ လေ ခေါ်သည် ။ ( တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို ခေါ်သည်။ အမည်ခေါ်သည်ကို သုံးလို့မရပါ )
J'appelle ... ရာ ပဲလ် ကျနော် ... ကို ခေါ်သည် , il appelle... အီ လ ပဲလ် သူ ... ကိုခေါ်သည် , elle appelle... အယ်လ် လာ ပဲလ် သူမ ... ကိုခေါ်သည်, nous appelons.... နူ ဇာ ပလွန် ကျနော်တို့ ... ကိုခေါ်သည် ( "e" ဖြင့် အဆုံးမသတ်တာဖြစ်လို့ ပုံမှန် အနေနဲ့ ပြန်ဖြစ်သွားတယ်)
ဥပမာ - peler ပလေ အခွံနွှာသည်
Je pèle ရ ပဲလ် ကျနော် အခွံနွှာသည်, il pèle အီလ် ပဲလ် အခွံနွှာသည်, elle pèle အယ်လ် ပဲလ် သူမအခွံနွှာသည်, nous pelons နူ ပ လွန် ကျနော်တို့ အခွံနွှာသည် (ပုံမှန် အတိုင်းပြန်ရေးသည်) "e" စာလုံးပေါ်မှာ ဗမာလို နောက်ပစ်လို ထဲ့ ရပါတယ်။ Accent Grave လို့ခေါ်ပါတယ်။ " è "
၄။ အလားတူစွာပဲ " ... eter " အဆုံးသတ်ဖြစ်နေရင် " ... eler " အတိုင်းပဲ " t " က၂လုံးထပ်သွားရပါမယ်။ ဥပမာ - jeter ရက်တေ လွှင့်ပစ်လိုက်သည်
သို့သော် ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဒီစာလုံးတွေကိုမှတ်ထားပါ။ မပါဝင်ပါ။
ဥပမာ - acheter အာ ရှက် တေ ဝယ်သည်
j'achète ကျနော်ဝယ်သည် , tu achètes မင်း၊ခင်ဗျားဝယ်သည်, Nous achetons ကျနော်တို့ဝယ်သည် ။( ပုံမှန် ) အသံထွက် မရေးပေးတာက အောက်မှာ လင့်ပေးထားလို့ပါ။
j'achète une pomme. ကျနော် ပန်းသီး တလုံးဝယ်သည်။
Verbe Conjugaison နဲ့ပါတ်သက်လို့နဲနဲပြောချင်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ Youtube ထဲကိုConjugaison acheter လို့ ရိုက်ထဲ့လိုက်တာနဲ့ အပေါ်ကလင့်အတိုင်းတန်းထွက်လာ တာပဲ။ သိချင်တဲ့စာလုံးကို ရိုက်ထဲ့လိုက်ရင်ပြင်သစ်ဆရာပေါင်းများစွာထွက်လာမယ်( ကောင်းတဲ့အသံထွက် ကိုတော့ရွေးတတ်ဖို့လိုပါမယ်) ဥာဏ်ရှိသလို သုံးနိုင်ရင် အခုခေတ်မှာ အကုန်လွယ်သွားပြီ။ ပါရီမောင် တို့ခေတ်တုံးက Conjugaison စာအုပ်လေးတအုပ် သူငယ်ချင်းတယောက်က ရှားရှားပါးပါးရလာတာကို စာကူးစက် နဲ့ လှည့်ထုတ်ပီး အတန်းထဲမှာ လက်သိပ်ထိုးရောင်းပြီး Conjugaison ဒုက္ခကို ရှင်းရတယ်။ ဟိုတုံးကတော့ ကွန်ပြူတာစာစီစာရိုက် ခေတ်မဟုတ်သေးဘူးလေ။ အခုတော့ မူရင်းစာအုပ်လေးကိုကိုင်နိုင်နေပြီပေါ့ဗျာ။
" ... er " နဲ့အဆုံးသတ်ရင် ကြိယာအုပ်စု (၁) ဆိုတာကိုမှတ်ရင်ရပါတယ် ။ (အခြေခံ နဲနဲရှိပြီး မရှင်းလင်းသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ )
1.Bonjour (ဗမာလို မင်္ဂလာပါ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချင်ပါတယ်၊ ညနေအချိန်လောက်အထိ ပြောနိုင်ပါတယ်၊ သူ့အတိုင်းပဲ ပြန်ပြော ရင်ရပါတယ် ) bon - ကောင်းသော , jour - နေ့
ဥပမာ - Bon Anniversaire ဘွန်း နာနီ ဗက်စယ် ဆိုရင် Happy Birthday လို့ ဆုတောင်းပေးတာပါ
2.Bonsoir ( ညနေပိုင်းမှာ နှုတ်ဆက်တာပါ ၊ကောင်းသောညနေ ပေါ့နော်။ သူ့အတိုင်းပဲ ပြန်ပြော ရင်ရပါတယ်) bon - ကောင်းသော ,soir- ညနေ" bon "ဆိုတာ ကောင်းသောလို့ အဓိပါယ်ရတဲ့ adjectif
6.Comment ça va? ဘယ်လိုလဲ ၊ ok ရဲ့လား ၊ အဆင်ပြေရဲ့လား ပေါ့။ ça vaအဆင်ပြေပါတယ်။ ça (ne) va pas. အဆင်မပြေဘူး။ စသဖြင့်ဖြေရန်။
17. A bientôt. (စာလုံး အကြီးနဲ့ ရေးရင် သင်္ကေတတွေ မထဲ့ရပါဘူး။ပုံမှန်ရေးရင်တော့ " à ") မကြာခင်တွေ့မယ် ၊
18. A plus tard နောက်မှတွေ့မယ် ၊ A ဆိုတာကတော့ Preposition ဖြစ်တဲ့ "à" ကို ပြောတာပါ၊
Posted by Maung Yit at 4:36 PM0comments
Labels: French, Paris Maung, Serial Program
Cartoon Saw Ngo - March 15th 2013
Posted by Maung Yit at 3:37 PM0comments
Posted by Maung Yit at 11:18 AM0comments
ဖူးရမလား ... ပွင့်ရမလား ... ငုံရမလား
သူစိမ်းပြင်ပြင် စိမ်းကားလိုက်ရမလား ...။
တချို့ ပိတောက်ပင်တွေ ဖူးနေတယ်ဆိုပဲ ...။
အဲဒီ ပိတောက်ဖူးတွေမှာ ...
စိုးနိုင် ... ဖုန်းမော် ... ၀င်းမော်ဦးတို့ရဲ့
ရှစ်စိပ်မက ကွဲကြေနေတဲ့ ... အရိုက်ခံအနှက်ခံ
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ သံဃာတွေရဲ့ ဦးပြည်းစိမ်းများ ...။
သခွတ်ပင်က သူ့အချစ်နဲ့ မီးကို ငြှိမ်းသတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ လိမ်စဉ် ရနံ့ ...။
ငုံရမလား ... ပွင့်ရမလား ... ကြွေရမလား
ဒီနှစ်ကူးအတွက် သွေးပျက် အေးခဲနေခဲ့တယ် ...။ ။
Posted by Aung Htet at 8:01 AM0comments
U Nandawuntha - Articles
စောနဘန်းနဲ့ မိရွှေဝါတို့ ရဲ့ မိမိကားပေါ်မှာ လိုက်ပါလာတိုင်း ပြောစကားများနဲ့အမူအရာများကို ငယ်ငယ်ကပါလာခဲ့တဲ့ ကဗျာဉာဏ်လေး တွေနှင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က ကဗျာတစ်ပုဒ်ဖွဲ့ ဖြစ်ခဲ့သည်။ စောနဘန်းကို အမှတ်ရ၍ စိတ်ထဲမှာ ရွတ်ကြည့်နေမိသည်။ ကဗျာခေါင်းစဉ်က "မင်းကြောင့်"တဲ့။